Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Mkpebi nde $ 44: Hilton hụrụ na ọ naghị elebara anya n'ihe gbasara mwakpo mmekọahụ
Na-agbasa News Travel • Crime • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Hilton Americas-Houston Hotel na ogbe ndịda Houston
Hilton Hotels nwetara akwụkwọ ndekọ $44 nde ikpe nleghara anya maka ịkwado mwakpo mmekọahụ nke onye ọbịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ndị juri nke Harris County eweghachila ikpe nde $44 megide Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hilton Management LLC Mgbe achọpụtachara na ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ ahụ tinyere onye ọbịa na-amaghị ihe na nke na-adịghị ike n'ime ụlọ na-ezighị ezi, na-eduga na mwakpo mmekọahụ.
Ndị ọka iwu sitere na Blizzard Law so onye ọka iwu ikpe bụ Michelle Simpson Tuegel nọchite anya onye lanarịrị mmeko nwoke na nwanyị Kathleen Dawson na ikpe megidere. Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hilton Management LLC na onye obo ebubo ebubo, Larry Clowers, onye bụ onye otu nwaada Dawson na-arụkọ ọrụ n'oge mwakpo ahụ.
Ndị ọka ikpe kwetara na nleghara anya Hilton rụrụ ọrụ dị mkpa na ihe mere na March 2017 wee nye Nwada Dawson $44 nde maka mmefu ahụike, enweghị ike ịkpata ego na nhụjuanya uche. Ndị juri ahụ chọpụtakwara na Maazị Clowers wakporo Oriakụ Dawson n'ụzọ mmekọahụ. Ekwenyere na ọ bụ ikpe nleghara anya kacha ukwuu n'okwu gbasara mwakpo mmekọahụ megide nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
“Ịgba àmà ka otu nnọkọ pụrụ isi gbanwee ndụ nwanyị ruo mgbe ebighị ebi bụ egwu,” ọkàiwu Ed Blizzard kwuru. "Ndị ọka ikpe a ghọtara mmetụta ọjọọ nke ihe omume a nwere n'ahụ Nwada Dawson wee weghachi mkpebi ikpe kacha mara amara maka onye e metọrọ n'ụzọ mmekọahụ megide otu nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Mkpebi a na-ezipụ ozi doro anya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ha ga-eji nkwanye ùgwù, nlekọta na nkwanye ùgwù na-emeso ndị ọbịa ha niile, karịsịa ndị na-adịghị ike. "
Dịka akaebe ụlọ ikpe siri kwuo, otu nwanyị na-agafe n'akụkụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hilton Americas-Houston dị na ogbe obodo Houston kpọrọ 911 mgbe ọ hụrụ otu nwoke ka ewepụghị uwe ogologo ọkpa ya ka o guzoro n'elu otu nwanyị enweghị ike dina n'ala. Ndị uwe ojii bịarutere, ndị ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ butere oche nkwagharị iji bufee Nwada Dawson, onye mmanya na-egbu na-enweghị ike ịkparịta ụka ma ọ bụ ije ije.
Ọ bụ ezie na Nwada Dawson nwere akara n'akpa ya, ndị ọrụ nchekwa achọpụtaghị na ọ bụ n'ezie ọbịa nke nwere ọnụ ụlọ debanyere aha ya n'aha ya. Ndị ọrụ ahụ ajụkwaghị ihe Maazị Clower kwuru na “ọ nọnyeere m.”
Ndị ọka ikpe na-ekpe ikpe ahụ lere vidiyo nchekwa Hilton na-egosi Nwada Dawson ka ndị nchekwa Hilton na ndị uwe ojii kpọbatara n'ime ụlọ Mr. Clower. Nwada Dawson tetara n'ụra n'ihi mwakpo mmekọahụ n'isi ụtụtụ.
Anna Greenberg, otu n'ime ndị ọka iwu nwaada Dawson kwuru, "Atụmatụ isi ime ụlọ dị iji gbochie nke a, mana Hilton agbasoghị ọbụna usoro kachasị mkpa onye ọ bụla nọrọ na họtel enwetala: ịlele njirimara onye ọbịa ahụ edebanyere aha." "Nke ka njọ, Hilton tara onye a tara ahụhụ wee kwado onye ahụ eboro ebubo idina n'ike, n'agbanyeghị vidiyo na ihe akaebe anụ ahụ na-akwado mwakpo ahụ."
Na mmechi ya, Oriakụ Tuegel rụrụ ụka, "Hotels Hilton, Otu ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ nchekwa, atumatu na akụrụngwa, otu ụlọ ọrụ Kathleen kwụrụ ụgwọ iji nweta ebe dị mma iji tọgbọ isi ya n'abalị, meghere ụzọ maka mwakpo mmekọahụ nke Kathleen ka a na-ebuba ya, dị ka ragdoll na oche nkwagharị Hilton, ọ bụghị n'ime ụlọ. ọnụ ụlọ ọ debanyere aha wee kwụọ ụgwọ, mana banye n'ọnụ ụlọ onye n'ike."